Nyaya ya Samsung Galaxy Fold ine bumpy imwe, izere nemakuru, kuderera, kutenderera, kutendeuka, uye kuzadza-pane kupukuta. Iyo yakapetwa foni, yakatanga kusekwa munaNovember 2018, haina kusvika pamusika kusvika munaGunyana 2019 - mushure meiyo kunonoka nekuda kwe zvikwangwani zvisina kumira zvakanaka. Kunyangwe mushure mekutanga, haina kunyatso kurarama zvinotarisirwa. Chidzitiro, semuenzaniso, vakakundikana kumwe kuyedzwa kwekutambudzwa. Uye foni yaive panjodzi kukwenya. Hapana anoziva zvechokwadi kuti $ 1,980 Galaxy Fold yakatengeswa zvakadii, asi mishumo inoratidza kumwe kunhu kwakatenderedza hafu yemamiriyoni.
Zvichida zvakakodzera kutema Samsung zvishoma zvishoma, sezvo iyo Fold yaive imwe yeiyo kutanga kworudzi rwayo kurova masherufu ezvitoro. Humwe tupukanana twaitarisirwa. Samsung ine mukana wekuzvidzikinura neiyo Galaxy Fold 2. makuhwa pamusoro peiyi sequel yatove akaunganidzwa pamusoro peiyo internet, zvichiratidza zvinhu zvakaita se pasi-iyo-skrini selfie kamera achange ari pabhodhi.
1. Zviratidzo zvekunze zvirinani
Kana chinhu chimwe nezveGolden Fold chaicho chaindinetsa, kwaive kuratidzwa kwekunze. Pa4.6 inches ine 21: 9 factor ratio, yaive yakareba, yakaonda, uye isina kunetseka. Iyo resolution yairemekedzwa pa1,680 na720, uye yekunze kuratidzwa kwaipenya uye kwakachena zvakakwana. Handifunge kuti chiratidziro chinoda mamwe mapikiseli, asi zviyero zvakakura zvinogona kubatsira nekushandisa, sekugona kumisikidza zvirinani pamberi peuso. Kunyangwe iyo yekunze kuratidzwa ichiita sefoni izere, zvakadaro yakauya seyakagomara maererano nezvimiro.
Ndakaona kuti handina kumboshandisa iyo yekunze kuratidza chero chinhu kunze kwekuyedza ziviso.
Zvese iwe zvaunogona kuita pane yekunze skrini iwe yaunogona kuita pane yemukati skrini, nekuda kwa kuenderera kweapp. Samsung neGoogle pamwechete zvakagadzira vagadziri veAPIs vanoda saka maapplication echinjika zvisina musono kwete chete kubva pane imwe skrini kuenda kune imwe, asi kubva kune chimwe chimiro kana hwindo kuenda kune rimwe vanhu vachiita zvakawanda neGolden Fold. Izvo zvese zvakanaka, asi ini ndakaona kuti ini ndaisamboda kushandisa iyo yekunze kuratidza kune chero chinhu kunze kwekuyedza ziviso. Yakava inokudzwa inogara iri-pane yekukiya skrini. Samsung inoda kuburitsa ruzivo kupa vanhu chikonzero chekutora mukana wekuratidzira kwekunze.
2. Mbiri yakaonda
Iyo Galaxy Fold yakakura uye inorema. Inoyera 160.9 x 62.8 x 15.7mm yakavharwa, kana 160.9 x 117.9 x 6.9mm yakavhurika, uye inorema iri pa276g. Ndiyo 100g kupfuura mafoni mazhinji. Ipo foni uremu zvinonetsa vamwe vanhu, nyaya hombe yakatarisana neFold yaive yehuremu painovharwa. Panoda kusvika 16mm gobvu, iyo Galaxy Fold yaive monster muhomwe yako. Izvi zvakaita kuti urambe uchikomberedza chiitiko chisina kugadzikana, zvinoenderana nekusunga kwaunoita iwe jeans rako.
Isu tinonzwisisa kuti tekinoroji yekutanga-chizvarwa yakashandiswa mune ino yekutanga foni yaive nemipimo. Izvo zvakati, isu tinotarisira kuona Samsung ichikunda kumwe kwekukanganisa mune iyo Galaxy Fold 2. Kana Samsung ikakwanisa kudzikamisa hukobvu hwakavharwa nekawo kana 1 kana 2mm (zvakanaka, uye huremu zvishoma, futi), iro ringave rubatsiro rwakakura . Samsung inogona kuzviita here? Hatizivi, asi tinogona kutarisira.
3. Kwete notch
Iwe unoona iro risinganzwisisike, rakaburitsa chikamu chikamu mumufananidzo uri pamusoro? Ehe, ndiyo notch yekamera uye yakashata sechivi. Isu tinotarisira kuti notch inoenda paGolden Fold 2.
Notches yaive epfupi-akararama dhizaini inodiwa. Mumujaho wekugadzira iyo inotetepa-inogona-bezels, vagadziri vefoni vakasundira zviyero zvavo kwese kuenda kumusoro kumucheto wepamusoro, vachisiya isina nzvimbo yekamera-yakatarisana nekamera. Notches dzinobvumira vagadziri vefoni kuchengetedza selfie cams uye tech senge IR scanner pamberi kumberi apo ichiwedzera screen real estate.
Mazhinji efoni dzichangoburwa, senge Samsung Galaxy S20 Ultra, vakagadzirisa kudiwa kwematanho ane punch hole kuratidza, uye icho chinhu chakanaka. Ini ndinotenda zvakasimba kuti Samsung inogona kusanganisa yayo yekupeta screen tekinoroji neayo Infinity-O inoratidzira kugadzira inokwenenzesa skrini ine punch hole kamera. Mune mamwe mazwi, hapana notch yakaipa.
Onawo: Nhare dzakanakisa dzevanovenga notch
4. Yakagara yakasimba
Kana iwe uchirangarira, iyo mavambo ekutanga yevaongorori nekukanganisa vakafunga kuti dziviriro diki yakashandiswa pachiratidziro yaive sarudzo, inobviswa firimu. Yakanga isiri. Kuongorora iyo purasitiki kwakabvarura skrini. Uyezve, vamwe vakapomera hinge yekuve wonky.
Samsung yakapfuura nematanho akati wandei kusimbisa chishandiso mushure mekunge maunitsi ekutanga akundikana mufashoni inoshamisa. Ini handipe simba reiyo v1.5 hinge pfungwa yechipiri. Zviri pachena pamusoro-mainjiniya kumiririra zviuru nezviuru zvezviito zvekuvhura-uye-zvepedyo. Samsung yakadzokorora hinji pane zvidiki Galaxy z flip.
Iyo Fold 2 inokwanisa kukwanisa kurarama zvakajairika, kushandiswa kwemazuva ese.
Hapana chimwe cheizvi chinoreva kuti Fold ine rugged, kwete zvachose. Hazvisi IP yakatarwa, uye Samsung chaizvo inonyevera kuti usazomboirasa. Izvozvowo ndezvechokwadi nezveZ Flip. Nyaya hombe iguruva. Hunhu hwekupeta skrini zvinoreva kuti kune kwakawanda kufamba kwechiratidziro pachacho, kusanganisira hinge wiring, uye zvakadaro. Kunyangwe Samsung iine system yemabristles inoreva kuchengetedza guruva kunze kweiyo hinge mashandiro, tsvina ichiri njodzi.
Ini handisi kukumbira Samsung kuti ive nechokwadi chekuti Fold 2 ine mil-spec kuomarara rating. Runhare runofanirwa, zvisinei, rukwanise kupona mumiedzo nematambudziko ezvekushandisa kwemazuva ese.
5. Mutengo wezasi
Iyo Galaxy Fold inodhura yekudiridza-ziso $ 1,980. Mafoni mashoma, senge $ 2,400 XNUMX Huawei Mate X, mari yakawanda. Kuwedzera pane mashoma emidziyo anouya padhuze neFold, kusanganisira Samsung pachayo Galaxy S20 Ultra uye Galaxy Z Flip, ese ari maviri ari pasi pe $ 1,400 chete. Ini handitarisiri kuona Samsung ichideredza mutengo nemazana nemazana, asi zvakachengeteka kufunga kuti Samsung yagadzirisa kumwe kugona mukugadzira uye kugadzira kweGolden Fold. Samsung inofanirwa kukwanisa kupfuudza idzi mari pamwe chete nevatengi mune imwe huwandu. Ini ndinofunga $ 1,600 kana pazasi ichave yakanaka nzvimbo yekutanga yeGolden Fold 2.
Nenzira, kana iwe uchifarira kutora iyo Galaxy Fold pamutengo (zvimwe) unonzwisisika, unogona ronga yakasimbiswa yakavandudzwa imwe paAmazon kweinenge $ 1,390.